January 23, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha January 23, 2020
(England) 24 Jan 2020. Liverpool ayaa wali la joojin la’ayahay kaddib markii ay guul dirqi ah ka soo heshay Wolverhampton oo ay ku booqatay Molineux Stadium, waxayna kaga soo adkaatay 1-2, kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay Liverpool. Daqiiqadii 8-aad kooxda Liverpool ayaa hoggaanka […]Sii akhriso
Ronaldo: “Haddii aan guursado xaaska Luis Figo waligeey guriga kama soo bixi lahayn”
(Madrid) 23 Jan 2020. Luiz Dalima Ronaldo ayaa mar ka yaabiyay xiddigaha Real Madrid iyo Taageeryaasha kubadda cagta kaddib hadalkii uu ka sheegay xaaska saaxiibkiis Luis Figo ee la xiriiray sariirta qoyskiisa. Fadeexad ayey ahayd, balse hoos loo dhigay marka hore inkastoo hadalkii Ronaldo uu ka xumaaday kabtankii Portugal ee Figo. Ronaldo 9 ayaana markaa yiri: […]Sii akhriso
(Inter) 23 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa ka jawaab celisay dalab ay dhigeeda Manchester United ka soo gudbisay Matias Vecino. Ole Gunnar Solskjaer ayaa xalka Man United ee qadka dhexe u arka Matias Vecino maadama Paul Pogba uu la maqan yahay dhaawac ka soo gaaray jilibka iyo Scott Mc Tominay oo la […]Sii akhriso
(England) 23 Jan 2020. Waxaa la shaaciyey safafka rasmiga ah oo ay garoonka ku soo geli doonaan kooxaha Wolverhampton Iyo Liverpool kulanka goor dhow soo gali doona ee horyaalka Premier League. Hadaba dhanka hoose kaga boggo Shaxda rasmiga ah ee Wolverhampton Iyo Liverpool: Wolverhampton XI: Liverpool XI: Gool FM.Sii akhriso
Soomaaliya January 23, 2020
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta gareen) ayaa Magaalada Nairobi ee Dalka Kenya Kulan kula Qaatay Safiirka America ufadhiya Soomaaliya Amb Donald Yamamoto Waxaana ay ka wada Hadleen Xoojinta Howl-galada ka socda Gobolka Shabeeleha Hoose ee Lagu Ciribtiraayo Kooxaha Argigixisada Al-shabaab iyo Joogtayna Weerarada Sii akhriso
Kulankan ay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare BFS iyo Guddiga Hinddise Sharciyeedka Doorashooshinka Qaranka u xilsaaray Aqalka Sare ayaa kulan Wadajir ah waxa ay la yeesheen safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya , Kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay Doorashada 2020-2021 la filayo in ay qabsoonto qaabka ay u dhacayso , Ansixinta Hindise sharciyeedka Sii akhriso
(London) 23 Jan 2020. Kooxda uu hogaamiyo Frank Lampard ee Chelsea ayaa ku guul dareystay in ay la soo wareegto weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Edinson Cavani. Blues ayaa u diyaar ah in ay dib u furto wadahadalada ay bishaan ku dooneyso ciyaaryahanka kooxda Lyon ee Moussa Dembele. Lampard ayaa kooxdiisa u sheegay in uu u […]Sii akhriso
(Manchester) 23 Jan 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qorsheeneysa in ay dib u soo ceshato weeraryahan keedii hore ee reer Argantina ee Carlos Tevez. Man United ayaa dareemeysa dhibaatada ka heysata maqnaayishiyaha gool dhaliyaheeda sare ee Marcus Rashford, kaas oo dhaawac uu soo gaaray lugtii labaad ee kulankii FA Cup-ka ay la ciyaaren Wolves, […]Sii akhriso
Muqdisho(SONNA) Golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen Muqdisho waxa ay ku meel mariyeen dib-u-eegis lagu sameeyay Sharciga La-dagaallanka Burcad-badeedda iyo ka-hor-tagga Afduubka. Ujeedda sharcigaan ayaa ah tilmaamidda iyo nidaaminta dembiyada la xariira burcad-badeednimad iyo afduubka iyo xukunnada ka dhalanaya Sii akhriso
(Liverpool) 23 Jan 2020. Wararka ka imaanaya kooxda Liverpool ayaa waxa ay ku waramayaan in Reds ay bar-tilmaameed deg-deg ah ka dhiganeyso ciyaaryahan u ciyaara Real Madrid . Warsidaha “El Desmarque” ayaa daboolla waxa uu ka qaaday in Liverpool ay dooneyso soo xero galinta kubad sameeyaha Real Madrid ee Francisco Isco. Liverpool ayaa Isco u aragta […]Sii akhriso